Wardiilee HTML keessatti Olkaa'uu fi Banuu
wardiilee HTML keessaa
Wardiilee HTML keessatti Olkaa'uu
LibreOffice Calc wardiilee galmee Calc akka galmee HTMLtti waliin olkaa'a. Jalqaba galmee HTML irratti, matadureen tokkoofi geessituuwwan tarree tokkoo galmee keessatti wardiilee matayyaatti si geessan ofmaan dabalamu.
Lakkoofsonni akka barreeffamanitti mul'atu. Dabalatees, iyyaatoo <SDVAL> HTML keessatti, galmee HTML LibreOfficedhaan erga bantee booda gatiiwwan sirrii qabaachuu kee akka beektu gatiin lakkoofsa keessoo sirriin ni barreeffamu
Galmee Calc ammee akka HTML olkaa'uuf, Faayili - Akkasitti Olkaa'i.
Sanduuqa tarree Gosa faayilii keessatti, bal'ina gingilchaawwan Calc biraa LibreOffice keessatti, gosa faayilii "HTML Document (LibreOffice Calc)" filadhu.
Maqaa faayilii galchiitii Olkaa'i cuqaasi.
Wardiilee HTML keessaa banuu
LibreOffice gingilchaawwan addaddaa faayiloota HTML, Faayilii - Bani jalatti Faayiloota akaakuu sanduuqa tarree kenna:
LibreOffice Calc keessatti banuuf akaakuu faayilii "Galmee HTML (LibreOffice Calc)" filadhu.
Dirqalaaleen LibreOffice Calc marti siif ni jiraatu. Garuu, dirqalaalee LibreOffice Calc gulaalliif kennu hundi dhangii HTMLtiin olkaa'amuu hin danda'an.
Faayilii - Akkasitti Olkaa'i
Title is: Wardiilee HTML keessatti Olkaa'uu fi Banuu